भियतनाम मा टाईफून आंधी को आतंक – सुदुरन्युज डट कम - SudurNewsNP – ताजा समाचार, सूचना अथवा भिडियो हरु
भियतनाम मा टाईफून आंधी को आतंक
द्वारा : सुदुर न्युज November 5, 2017
भियतनाम मा टाईफून आंधी ले लगभग २७ जना को मिर्त्यु भएको छ ! आधि ले गर्दा दुईदर्जन भन्दा बढी मान्छे हरु हराइरहेका छन् ! भियतनामी अधिकारी हरु का अनुसार उक्त आधि ले दश हजार भन्दा बढी घर हरु क्षति ग्रस्त भएको बताएका छन् ! APEC शिखर सम्मेलन मा आएक आगन्तुक हरु लाई स्वागत गर्नु भन्दा पहिले आधि ले गरेको क्षति प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदाय ले दुख प्रकट गरेका छन् !
सामान्यतया टाईफून ले देश को उत्तरी भाग मा आक्रमण गर्ने भए पनि यस पालि दक्षिणी समुन्द्री तट मा आएको छ ! त्यहाँ आंधी को गति १३० कि. मि प्रति घण्टा को गति मा भएको जानकारी पप्रकोप नियन्त्रण कार्यालय ले दिएको छ ! आंधी को पुर्ब संकेत पाउन साथ् ३०,००० मानिस लाई अन्यत्र सारिए पनि २७ भन्द बढी को ज्यान गएको छ !
पछिल्लो २ दशक मा आंधी ले भियतनाम मा साढे छ खर्ब को क्षति भएको छ
भियतनाम मा टाईफून आंधी
चुनावको मुखमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर एमालेमा प्रवेश
अल्पसंख्यक हिन्दुका घर र मन्दिरमा लुटपाट